Home News Deni oo daaha ka Qaaday waxyaabaha ay isku hayaan isiga iyo Villa...
Deni oo daaha ka Qaaday waxyaabaha ay isku hayaan isiga iyo Villa Soomaalia
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa shaaca ka aaaday waxa ay isku hayaan isaga & dowladda Federalka Somaliya, kadib markii Odayaasha Dhaqanka Puntland uu hadal u jeediyay.
Siciid Cabdulaahi Deni ayaa sheegay arrinta xaqiiqda ah ee meesha taal inay tahay xisaab uga maqan dowladda Federalka Somaliya, islamarkaana loo baahan yahay isla xisaabtan.
Sidoo kale Saciid Deni ayaa waxaa uu sheegay in Puntland ay ka go’antahay in Madaxda dowladda xiligaa ay kula xisaabtanto saamiga Puntland uga maqan dowladda dhexe, waxaana Bulshada maamulkiisa uu ka dalbatay inay ku taageeraan Go’aankiisa.
Bulshada reer Puntland ayuu sheegay in si qaldan wax loogu sheegay islamarkaana laga dhaadhiciyay in Madaxweynaha uu hortaagan yahay mashaariic laga fulin lahaay deeganada Puntland, balse arrinta aysan sidaasi aheyn.
“Dowlada Federaalka ah aniga waxaan soo ahaa Wasiirkeeda Qorsheynta Waxa meesha yaalla oo nooga maqnaan kara waan garanaya laakiin xaqiiqda Waxa ay dadweynuhu maleynayaan Mashaariic mahan dowladda Soomaaliyeed waxay ku jirtaa geedi Socod Siyaasadeed , Dowladda wali ma caga dhigan Soomaaliya” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Isaga oo hadalka sii wata Madaxweynaha Puntlandn wuxuu sheegay inay jiraan meelahha qaar oo laga abaabulayo kulamo looga soo horjeedo Maamulkiisa, balse taasi aanan la aqbali doonin.